अलैँची : घाटाले उठिबास | गृहपृष्ठ
Home अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) अलैँची : घाटाले उठिबास
on: April 10, 2019 अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
अलैँची : घाटाले उठिबास
धनकुटा । पूर्वका चार जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र धनकुटाको हिलेका अलैंची व्यापारीहरू घाटाका कारण घरबारविहीन हुन थालेका छन् । घर जमीन बैंकमा धितो राखेर अलैंची व्यापारमा गरेको लाखौंको लगानी अहिले डुब्ने अवस्थामा छ । ऋण तिर्न कति विदेश लागेका छन् भने कोही भएको घरघडेरी बेचेर अन्यत्र लाग्न थालेका छन् ।
बाँकी रहेकामध्ये कतिपयलाई बैंकले कहिले घरजग्गा लीलाम गर्ला भन्ने त्रास छ । प्रतिमन (४० केजी) रू. १ लाख २० हजारसम्ममा विक्री भएको अलैंचीको मूल्य गएको ३–४ वर्षयता २७ हजारमा झरेकोमा रू. ३३ हजार प्रतिमत मूल्य छ । मूल्य अस्थिरताको समस्या अहिलेको मात्र हैन । डेढ दशकअघि पनि यस्तै समस्या थियो ।
अलैंची व्यवसायी संघ हिलेको तथ्यांकअनुसार २०५७ सालमा प्रतिमन रू. ७ हजार रहेको अलैंची २०६० सालमा रू. २२ हजार पुगेको थियो । तर सोही वर्ष नै मूल्य अचानक घटेर रू. ४ हजारमा पुगेको थियो । पुनः मूल्य बढेर २०६७ सालमा रू. ३५ हजार हुँदै २०७१ मा आइपुग्दा रू. ६५ हजार भयो । मूल्य अझ बढेर रू. १ लाख २० हजार पुगेपछि घट्दै चालू आर्थिक वर्षको शुरुआततिर रू. २७ हजारमा झरेको छ ।
ऋण तिर्न घरघडेरी
शान्ति ट्रेडर्स, हिलेमार्फत २०५२ सालदेखि अलैंची व्यापार गर्दै आएका ६५ वर्षीय शेरबहादुर राईले अलैंची व्यापार गरेर अहिलेसम्म ४२ रोपनी जमीन र ३ घर गुमाइसकेका छन् । २०५९ र २०६० सालमा मूल्य अचानक निकै घट्दा उनले ८२ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपर्‍यो । त्यो ऋण चुक्ता गर्न संखुवासभा जिल्लाको खाँदबारीमा ४१ रोपनी जग्गा र त्यसमा भएको घर र हिले बजारमा ८–८ आनामा बनाएका २ ओटा घरघडेरी बेचेको उनले बताए ।
वार्षिक रू. १२ करोडसम्मको अलैंची निर्यात गरेका उनी भन्छन्, ‘जुवाको खालझैं भयो अलैंची व्यापार, एक दिन त कसो दाउ नपर्ला भन्दै दाउ थाप्यो, घरबारी गएको थाहै हुन्न ।’
घाटापछि किराना पसल
२०४६ सालदेखि अलैंची व्यापार गर्दै आएका ५६ वर्षीय बाबुराम राईलाई अलैंची व्यापारबाट लागेको ऋणको चिन्ताका कारण अनेक बिमारले च्याप्यो । दुवै किड्नी फेल भएर गत वर्ष मृत्यु भयो । माछापुच्छ«े बैंकबाट रू. १८ लाख ऋण लिएर अलैंची व्यापारमा लगाए लगत्तै घाटा लागेपछि उनी थलिएका थिए । रू. १२ लाख घाटा लागेसँगै अलैंची व्यापार छाडेर किराना पसल गरिरहेकी उनकी पत्नी सविना राईले उक्त ऋण चुक्ता गर्न हिलेस्थित घरसहितको १२ आना जमीन बेच्न लागेको जानकारी दिइन् ।
ऋण तिर्न कुवेततिर
हिलेकै व्यवसायी मण्डल राई अलैंची व्यापारका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको रकम तिर्न नसकेपछि ऋण चुक्ता गर्न वैदेशिक रोजगारमा कुवेत गएका छन् । आठ वर्ष अघिदेखि अलैंची व्यापार गर्दै आएका उनी तीन वर्षयता अलैंचीको भाउ घटेपछि समस्यामा परेका थिए । हिलेको न्यूरोडको ८ आनाको घर जमीन धितो राखेर व्यापार शुरू गरेका मण्डलले रू. ७ लाख ऋण तिर्न बाँकी भएको उनकी श्रीमती सुशीला राईले जानकारी दिइन् ।
अलैंची दाना विक्रीबाट ५ करोड आम्दानी
अलैंचीको मूल्य नपाउँदा किसान चिन्तित
दोहोरो निकासी करको मारमा अलैंची उत्पादक
अलैंची खेती कर्जामा आकर्षण बढ्दो